Kaspersky 2009 ကို 2010 Upgrade လုပ်ခြင်း — MYSTERY ZILLION
Kaspersky 2009 ကို 2010 Upgrade လုပ်ခြင်း
November 2009 edited November 2009 in Antivirus & Virus
ကျနော့် ဆီကစက်တွေကို Kaspersky 2009 License Version တွေသုံးထားပါတယ်။
ဟိုနေ့က Kaspersky 2009 ကို လက်ဆော့ပြီး 2010 upgrade လုပ်ကြည့်လိုက်မိတယ်။
နဂို 2009 မှာသုံးထားတဲ့ လိုင်စင် အတိုင်း ... Expire ဖြစ်မဲ့ Date လဲ အရင်အတိုင်းပဲ။
ဆိုလိုတာကတော့ .... 2009 Lisence Version ကို 2010 June လအထိ Valid ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် 2010 Upgrade လုပ်ပြီးတဲ့ အခါမှာလဲ နဂိုအတိုင်းပဲ Valid ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။
Kaspersky 2009 Lisence User တွေ 2010 ကို Upgrade လုပ်နိုင်ကြစေဖို့ Share လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ....... :6:
အဲဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုသိထားရမှာက ကိုယ်က Antivirus ကိုဝယ်သုံးထားရင် Antivirus ကိုပဲ Upgrade လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ Version အတိုင်းပဲ လုပ်လို့ရမှာပါ။
ကိုယ်က Internet Security ဝယ်ထားရင် တော့ Internet Security ကို Upgrade လုပ်လို့ရပါတယ်။
မတူတာကို သွားလုပ်မိလို့မရတာကိုတော့ သတိထားရမှာပါ။
ကုလားမကြီးယူရင် ဘာဘူလေး Upgrade ထွက်လာပြီး
တရုတ်မယူရင် ပေါက်ဖော်လေး Upgrade ထွက်လာသလိုပေါ့ဗျာ ...... :P
November 2009 edited November 2009 Banned Users
အဲ့တာတော့ ဟုတ်တာပေ့ါဗျ အဲ့လိုရတာကတော့ မဆန်းပါဘူးဗျာ ခင်ဗျားကလဲတော်တော်နောက်တဲ့လူ :5::5:
အဲ့တာတွေက software တစ်ခု၀ယ်မယ်ဆိုရင် သူ ့ဆိုဒ်မှာကို details တွေရှိပြီးသားဗျ google မှာရှာတဲ့လူနဲ ့သူများပြောတာကို ပဲရှာတဲ့လူနဲ ့တော့ ကွာတာပေါ့ဗျာ
ကယ်ပါစကိုင်း 2010 လိုင်စင် ကီး ကို offline update လုပ်တာ အဆင်မပြေလို ့..
ဘယ်ဆိုက်စ် မှာများ offline ရလဲ ခင်ဗျာ..........:D
ကျွန်တော် ထဲမှာတော့2010 ကို လိုင်စင်ကီး တစ်လစာ ဖရီး နဲ ့အိုတေ မှ စိုပြေ တယ်..
တကယ်တန်း computer ကောင်းကောင်းကျွမ်း၀င်မှုမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်က .... သောင်းဂဏန်းပေး၀ယ်ခဲ့ရတဲ့ software ကို လက်တဲ့စမ်းပြီး 2009 to 2010 upgrade လုပ်ကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးချင်မှကူးလိမ့်မယ်။ Upgrade လုပ်လိုက်လို့ တစ်ခုခုဖြစ်သွားမလား။ Blacklist ဖြစ်သွားမလား ..... ဒီလိုအတွေးနဲ့ စိုးရိမ်လို့လုပ်ဖြစ်ချင်မှလုပ်ဖြစ်မယ်။ လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ လုံး၀ကိုမသိလို့ မလုပ်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် .... ကျနော်ရေးခဲ့တာ .... မသိတဲ့သူတွေအတွက်ရေးခဲ့တာ။
ခင်ဗျား သိနေလို့ ... ဒါ ကလေးကစားစရာ .... ဘာအဆင့်မှမရှိတာ ... ထင်ရင်လဲ .. ထင်နိုင်ပါတယ်။
Alexander ... Child Play တွေရေးပြီး IT level KID အဆင့်ပဲရှိတယ်ထင်လဲ ... ထင်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့လုပ်နေတာ .... ကိုယ်သိတဲ့ နဲနဲလေးကို ... လုံး၀မသိတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့ပဲခံယူထားပါတယ်။
ဒီ Thread မှာလဲ စိုင်းကျော်စွာေ၀ ကို ခင်ဗျား နင့်နင့်နဲနဲပြောပြီးသွားပြီ။ ပြန်တောင်းပန်ထားတာတော့တွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ... ပြောပြီးသွားပြီ။
ကျနော် အကြံပေးချင်တာက .... အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကြံပေးတာမျိုးပြုစေချင်ပါတယ်။
ခုကတော့ .... လှောင်ပြောင်ရှုံ့ချတာလို့ပဲယူဆလို့ရပါတယ်။
ကဲဖြစ်သမျှ ကိစ္စတွေကို ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ :65:
kaspersky updates sites ပါ
nainghtun wrote: »
အဲဒါလေး အသုံး၀င်တယ် Bro.
ွှGreat Thanks ....
ဒီလိုပိုစ် ့ကို တင်တဲ ့အတွက် လူဘယ်နှစ်ယောက် အကျိုးရသွားလည်း.. သရက်ပိုက်ရှင် ကို အလက်ဇန္ဒားလည်းအကျိုးမရှိတဲ့ပိုစ် ့တွေသရက်တွေတင်နေတာမဟုတ်ဖူး... အားရင် သူ့ရဲ့သရက်တွေပိုစ် ့တွေသွားဖတ်ပါဦး ... နောက်ပြီးတော့ဒီ မှာလည်း ရေးထားသေးတယ်... အားလုံးကို လိုက်ဟားနေတာလားတော့မသိတော ့ဖူး... အမ်ဇက်ဆိုတာ လှောင်ပြောင်သရော်တဲ ့နေရာမဟုတ်ပါဖူး... ဒီပိုစ် ့ကို အမုန်းခံပြီဒရေးတာ နောက်အမ်ဇက်မှာ ဘယ်သူမှ ဘယ်သူမှမလှောင်ပြောင်ဖို့ပါ.. ပျော်စေချင်လို နောက်တာရပါတယ်... ထိခိုက်အောင် မသရော်မ်ိဖို ့အရေးကြီးပါတယ်..
နေပါအုံးဗျာ ဒီဖိုရမ်မှာ အဲ့လို ကွန်ပြူတာ အင်တာနက်နဲ ့မကျွမ်း၀င်တဲ့လူရှိလို ့လားဗျာ .....
ဒီဖိုရမ်၀င်ပြီးတော့ ဒီ thread အထိကြည့်နေတဲ့လူက အဲ့တာကို မသိလောက်အောင်တော့ မရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ်..သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါ:39::39::)):)):))
ကျနော်တို့လုပ်နေတာ .... ကိုယ်သိတဲ့ နဲနဲလေးကို ... လုံး၀မသိတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့ပဲခံယူထားပ ါတယ်။
ရှိပါတယ်... အများကြီးပါ..စဉ်းစားစရာကိုမလိုဖူး..။ ဟက်ပီးမန်းကီး ကိုယ်တိုင်လည်းပါပါတယ်...ဖိုရမ်၀င်ပြီးဒီသရက် တွေဖတ်တာကတော့ပြပေးရင်လူတိုင်း တတ်ပါတယ်...
ဒါဗေမယ့် မသိတာတွေတော့တော်တော်များတယ်..အဲဒါကြောင် ့လည်း ၀င်မေးနေရတာပေါ့ခင်ဗျားကတော်တော် တော် နေလို့သိနေတယ်ဆိုလည်း မျှေ၀လိုက်ပေါ့နည်းကောင်းလမ်းကောင်းလေးတွေ..။
အလကား သူများကိုသရော်နေတဲ့ပိုစ် ့တွေရေးမယ့်အစား..။ Alexander ပြောသွားတာရှင်းရှင်းလေး ...နားမလည်ချင်ယောင်မဆောင်နဲ စကားတွေသက်သက်မဲ့ကားကုန်ပြီ..။ဒီဖိုရမ် က နည်းပညာနဲ ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖိုရမ်.. မသိလို ့မေးတဲ့သူတွေကို သိသလောက်တတ်သလောက်လေးတွေ မျှေ၀ပေးနေကြတာ.. ။ ဒီဖိုရမ် ၀င်ပြီးနောက် ဒီလို ပဲ သူများတွေကို လိုက်သရော်နေဦမယ် ဆိုရင် ခင်ဗျားအိမ်ပြန်ပြီးအိပ် နေလိုက်တော ့...။
That's Right! Man :39:
ကဲ ့ရန်ဆက်မဖြစ်ကြပါနဲ ့ဂျာနော်။
ငါ့အိမ်ရောက်နေ လို ့လားကွ:)):)):)) ဒါပေမဲ့ မျောက်မျိုးတွေစိတ်မ၀င်စားဘူး:14::14:
ဖိုရမ်မှာ ပြဿနာမဖြစ်စေချင်လို့ ကျနော် ဒီThread ကို ပိတ်ထားလိုက်ပြီ။
ကျန်တာကို ဖိုရမ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ကဆက်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
Kaspersky 2009 နဲ့ 2010 ကွာခြားတဲ့ အဓိက ကိစ္စတစ်ခုလဲ သတိထားမိလို့ ထပ်တင်လိုက်တာပါ။
Kaspersky 2009 ကို IPStar Connection နဲ့ ဘယ်လိုမှ online update လုပ်လို့မရပါဘူး။
ကျနော် မော်ကျွန်းမှာ .ု.. UNICEF, UNDP, FRC သုံးနေရာမှာ test လုပ်ကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘယ်မှာမှမရပါဘူး။ ဘိုကလေး မှာ လဲမရဘူး။ လပွတ္တာမှာလဲမရဘူး။
အခု 2010 တင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ သတိထားမိတာက .... Auto Update ( Online Update ) ရနေခြင်းပါ။
Internet Connection အတွက် IPStar တစ်ခုကလွဲပြီး တခြားအားကိုးစရာမရှိတဲ့ နယ်တွေအတွက်တော့ တော်တော်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။
ရန်ကုန်လို နေရာမျိုးမှာသိပ်မထူးခြားတဲ့ ကိစ္စပေမဲ့ ... IPStar ပဲရတဲ့ နယ်မြို့တွေအတွက်တော့ ၀မ်းသာစရာကိစ္စမို့ပါ။
( ကျနော့်လို Kaspersky ကလွဲပြီး တခြားဟာကို Anti-Virus လို့မထင်တဲ့ Kasper-Maniac အတွက်ပိုပြီး၀မ်းသာစရာပေါ့ ... )
အရင်ဆို .... ကျနော် မော်ကျွန်းရုံးမှာ Kaspersky 2009 တင်ရင် Online Update လုပ်မရလို့ Kaspersky7ပဲတင်ပြီး ထားရတာ။ ခုဆို Kaspersky 2010 တင်မယ်ဆို တင်လို့ရသွားပြီပေါ့ဗျာ ..... :6: